ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ကြောင်နှင့်ဆက်နွယ်မှုထံမှသင်ယူငါးခုဟာဘဝသင်ခန်းစာများ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇူလိုင်. 06 2020 |5မိဖတ်ပြီးသား
ကျနော်ပထမဦးဆုံးကျွန်မရည်းစားတွေ့သောအခါ, ခရစ္စတိုဖာ, လွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်, ကောလိပ်ကျောင်းကနေ scuffed ဘွတ်ဖိနပ် - ငါပြားချပ်ချပ်ဖိနပ်၏တစ်ဦးတည်းသာတစ်စုံခဲ့. အကြှနျုပျ၏ဘွဲ့ကြိုအတွေ့အကြုံအပေါ်ပြန်စဉ်းစား, ငါသူတို့ကိုပင်ဝတ်ထားကိုသံသယဝင် 10 ကြိမ်, ရေခဲတစ်လက်မအရွယ်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ coated မဟုတ်လျှင်ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်လူတန်းစားရန်နှင့် မှစ. ငါ့ခရီး၏အများဆုံးသယ်ဆောင်အဖြစ်, သောအချက်မှာငါတုံးအပေါ်မှီခို. ဒါကို, ငါသည်နောက် embellished (အတန်ငယ်။) ခပ်သိမ်းသောလမ်းအတွက်တစ်ဦးက girly မိန်းကလေး, ငါမိတ်ကပ်မျက်နှာဖုံးမပါဘဲတော်တော်လေး sweatpants ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိသည်သို့မဟုတ်ငါ့မျက်နှာကိုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်သက်သာမခံစားရခဲ့, ငါသည်ဤပြောင်းလဲကွိုမွဘယ်တော့မှ. သို့သော်ထိုသို့ပြုကြ၏, ငါကအခြားအမျိုးသမီးများအတွက်မမျှော်လင့်, အဖြစ်ကိုကောင်းစွာ.
မိတ်ကပ်နဲ့ stilettos မှားရာတစုံတခုမျှမက - ထိုသူတို့ပျော်မွေ့! ရုံသူတို့အပေါ်မှာမှီခိုကြပါဘူး. ငါမဂ္ဂဇင်းများနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပတျဝနျးကငျြမီဒီယာ၏စဉ်ဆက်မပြတ်တရစပ်မှာကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာ, ငါဤမျှလောက်များစွာသောမိန်းမတို့ယုံကြည်စိတ်ချမှုဦးစီးဌာနရှိတုန်ကယင်ဖြစ်ခြင်းမြေပြင်ပေါ်မှာအဘယ်ကြောင့်စဉ်းစားမိရန်မလိုပါ. ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူငါသည်ငါ့ feline အပေါင်းအဘော်နှင့်ငါ၏အသက်တာ၌ဖြောင့်-ပစ်ခတ်မှုလူထဲကသင်ယူဖူးတဲ့အောက်ပါသင်ခန်းစာများကိုဝေမျှ:
1. သင့်ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီအမှတ်အသားများအဖြစ်ကိုခင်တွယ်ပါ: ခရစ်နှင့်အတူကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးနွေရာသီရက်စွဲများတဦးတွင်, ငါ Self-သားရေလုပ်သမားမှကြည့်ရောကျလာပုံကိုဖြူဖပ်ဖြူရောအကြောင်းထိတ်. ငါမဖြူဖပ်ဖြူရောပေါ့လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါ, ငါစနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်ကျောက်ဖြူခွက်ရယ်ဘာကိုဆိုလို, ဒါကြောင့်ဒီအမြန်-ပြင်ဆင်ချက်လိမ္မော်ရောင်နှင့်နောင်တ၏အလင်းတန်းများဖြာဒါပေမဲ့ဘာမျှမမှဦးဆောင်. ရတဲ့အခါသူ (သိလျက်နှင့်) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် tanner ပေါ်တွင်တင်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်မေးခွန်းထုတ်, ကျွန်မသန့်ရှင်းသောကြွလာ (မဟုတ်ကပကတိသဘောတွင်ပေမယ့်, က exfoliation တစ်ပတ်ကြာပါဝင်ပတ်သက်သည်။) ငါစဉ်းစားငါနေတဲ့လှပရှားပါးသောအသားအရေသေံခဲ့ပြုပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်သူကငါ့ကိုမေးတယ်. ငါအကြင်သူသည်ငါ၏အသားအရေကိုရည်ညွှန်းကြောင်းလမ်းမကြားဖူးချင်ပါတယ်, ငါသတ္တုမွေးကြိုင်တဲ့ရနံ့တစ်ခုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ထူးခြားတဲ့တစ်ခုခုပြောင်းလဲပစ်ဖို့ကြိုးစားနေဒါရီစရာခံစားခဲ့ရနှင့်ငါ့များသိမ်းပြီးညနှင့် muddied ဖြူဆင်မြန်းထားရစ်.
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ကိုငါတို့ကဲ့သို့ကြည့်ချင်တယ်, ကျမတို့လိုသငျ့, အဖြစ်ကိုကောင်းစွာ. ဒါဟာသင်တို့ကဲ့သို့ဘာမျှမကြည့်တဲ့ချိန်းတွေ့ပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံရှိခြင်းဆင်တူင်, အသိအမှတ်ပြုမှု၏အချက်အတိတ် photoshopped. ငါတို့ရှိသမျှသည်ထူးခြားသောနေ, ငါတို့ကိုမတူညီတဲ့လုပ်သောသူတို့သည်လည်းထိုအမှုအရာသည်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုလူအစုအဝေးထဲကထွက်ရပ်ပါစေ. '' အခြားသူများကိုတပ်မက်သင့်ရဲ့တကယ်အမှတ်အသားများကိုပြသနှင့်မဖို့ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှာမည်.
ကြောင်ကဲ့သို့, အလားတူစစ်မှန်တဲ့ရရှိထားသူ. တစ်ဦးက calico မပိုလှပနေတဲ့ tabby ထက်မှတ်သားသည် - ကညျ့ရှု၏မျက်စိထဲမှာအားလုံးင်.
2. ခန္ဓာကိုယ်အရှက်ကွဲခြင်းကိုမကျင့်: ငါ့ကြောင်၏နှစ်ဦးသေးငယ်သောများမှာ, နှစ်ခုပျမ်းမျှအားတည်ဆောက်ဖြစ်ကြ၏, နှစ်ယောက်ကြီးများဖြစ်ကြသည်. သူတို့ကဒီမသိရပါဘူး. အကြှနျုပျ၏အကြီးမားဆုံးကြောင်ကိုကြောင်အပေါ်တစ်ဝက်ကသူ့အရွယ်အစားခုန်ခြင်းနှင့်သူတို့ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ကစားနေ့စွဲနှင့်အတူစိတ်လှုပ်ရှားနေကြသည်မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်အံ့ဘွယ်သောအမှု. သာအမျိုးသမီးတွေကိုယ်ခန္ဓာကို-bashing ရပ်တန့်နိုင်လျှင်ရွံရှာခြင်းနှင့်ဒါပမေဲ့အံ့သွနှစ်ဦးစလုံးအဆင်ပြေချောမွေ့. ကျနော်တို့ပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိလာ, သို့သော်လည်းငါသည်ငါ၏အဆွေခင်ပွန်း၏ဤမျှလောက်များစွာသောရိပ်မိကိုယ်ခန္ဓာချို့ယွင်းချက်အကြောင်းပေါ်နှင့်အပေါ်သွားနားထောငျတျော. ဤရွေ့ကားသညာထို့နောက်ယောက်ျားဗစ်တိုးရီးယားရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်မော်ဒယ်များမှနှိုင်းယှဉ်လျှင်သူတို့၏အလောင်းကိုကြည့်ရှုဘယ်လိုစိုးရိမ်မှုနှင့်အတူဒွန်တွဲလျက်ရှိ. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-talk မှမျိုးငါတို့သည်ကိုယ်အလောင်းတွေမသာအကြောင်းပါစေအစဉ်အဆက်ဦးဆောင်, ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်အလောင်းများကို. ငါနဲ့တူကိုးကားစကားကိုနားထောငျသောအခါငါအောက်မှာ, "ရီးရဲလ်အမျိုးသမီးတွေ curvy ပါ။ " တင့်တယ်သောမိန်းမတို့ပုံစံမျိုးစုံတစ်ခုခင်းကျင်းလာ, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေး form မှာကျွန်တော်တို့ကိုရှုမြင်သမျှကိန်းဂဏန်းရဲ့ဘက်ယမ်းကုန်အံ့. လူတို့သညျအကြှနျုပျတို့အလောင်းတွေခွဲခွာကြားချင်ကြဘူး, နှင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်-လွန်း-မကြာခဏသူတို့အနိုင်ရမနိုင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုး၌ထားတော်မူ၏, နေပါစေသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်. ကိတ် Upton, ကိတ်ဝင်းစလက်, နှင့်ကိတ်မော့စ်အားလုံးကိုတည်ဆောက်ကွဲပြားခြားနားပါသည်, ဒါပေမယ့်သူတို့အားလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအဆင်းလှသောအစ်မအဖြစ်သတ်မှတ်မည်ကြသည်မဟုတ်?
အရှည်ဆုံးအချိန်များအတွက်, ငါသည်ငါ့ခြေထောက်တွေကပ်-thin နဲ့မဖြစ်ကြောင်းမခံမရပ်နိုင်, ခရစ်ငါပိုပြီးဘောင်းဘီတိုနဲ့အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်သောသူသည်ငါ့ခြေထောက်တွေကိုခစျြနှင့်အကြံပြုကြောင်းပြောတယ်ကြသောအခါငါ့အံ့သြစိတ်ကူး. ညာဘက်ပုဂ္ဂိုလ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်မယ့်ကပြောင်းလဲပေးလိုက်နိုင်သငျသညျအတင်းမပါ. ကအမြဲတမ်းသတိရ.
3. အစားအစာကိုခံစားပျော်မွေ့: ah, ရယူထားသော၏စိတ်လှုပ်ရှားစရာ. ငါစွဲမက်သောအလေးအိတ်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါ, ငါ့အကြောင်သားအပေါငျးခွောကျအကြှနျုပျ၏ခွကေိုမှာရှေ့ဆက်ကောက်ခံ. သူတို့ကဖြစ်ရပ်တစ်ခုရဲ့ရှိရာအမှတ်အစားအစာကိုချစ်. အဘယ်သူသည်သူတို့ကိုအပြစ်တင်နိုင်ပါတယ်? ဤမျှလောက်များစွာသောအမျိုးသမီးများကဲ့သို့ပင်, ငါရေကူးဝတ်စုံနဲ့အတွက်ဿုံ svelte feeling မရဲ့အထက်-မှတ်ချက်ချကိုယ်ခန္ဓာအရှက်ကွဲခြင်းကိုခံစားခဲ့ရသကဲ့သို့ငါအစာနှင့်အတူစစ်ဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်. ငါကပိုယခုက Chris နဲ့ကျွန်မပထမဦးဆုံးတွေ့သောအခါထက်ငါးပေါင်ချိန်, သို့သော်ထိုအဘို့အလဲလှယ်, ငါသောကြာနေ့ညတီဗီ Bing စဉ်အတွင်းသူနှင့်အတူပီဇာ၏စာရေး shared င်. ငါစကေးအပေါ်မည်သည့်အရေအတွက်အဘို့သူတို့အားကုန်သွယ်မှုမညျမဟုတျ. ငါဝေးပိုအဆင်ပြေမှာငါ့ကိုယ်နှင့်အတူပေါ့ 31 အစဉ်အမြဲငါငါ့လူငယ်ခဲ့ပါတယ်ထက်.
ကျန်းမာသောအစာစားခြင်းဟာအံ့သြဖွယ်သောအရာဖြစ်၏, ငါမိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်တာကိုခိုင်မြဲစွာယုံကြည်သူပေါ့ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ။) ခံစားခြင်းအသက်နှင့်အားလုံး၎င်း၏အရသာ, သော်လည်း, တော်တော်မှုကြီးဖြစ်ပါသည်, အဖြစ်ကိုကောင်းစွာ. ထိုသို့အတူသောစကားပြောဆိုမှု - သင့်ကယ်လိုရီသင်သည်မုန့်ညက်ခံစားခြေရာခံကိုဆုံးရှုံးကြောင်းစားသုံးမှုအပေါ်အရမ်းအာရုံစူးစိုက်မနေပါနဲ့.
4. ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဂရုစိုက်ပါ: ငါ့အကြောင်ပင်ပန်းတဲ့အခါ, သူတို့အိပ်. (ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လုံးဝမောပန်းနွမ်းနယ်င်, စကားမစပ်။) အခြားကြောင်သူတို့ကိုအလုပ်မှာအနှောက်အယှက်တစ်ခုသို့မဟုတ် designated အာကာသကြူးကျြောလာတဲ့အခါ, သူတို့အထင်အမြင်သေး voicing မရှိတွန့်ဆုတ်ပြီ. ဒါကြောင့်မကြာခဏဆိုသလို, ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲတွင်စကားပြောကျော်အလေးအနက်ထား, ဒါမှမဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကကျွန်တော်တို့တစ်စုံတစ်ဦးစှာဆကျဆံမဟုတ်ကြောင်းတစ်လမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြုမူဆက်ဆံပါစေ. ကြောင်, ကြောင်းအမှုနှင့်အမျိုးသားများသည်, နှင့်အတူအုပ်ကဲ့ရဲ့သံကိုပြုရရန်စိတ်သဘောထားရှိသည်, ဤသို့သူတို့၏ဘဝနှင့်အတူပေါ်ရွေ့လျားခြင်းနှင့်မကျေနပ်မှုသို့မဟုတ်ခါးသီးမှုမှအပေါ်ကိုင်ဆောင်မဟုတ်. သူတို့ကအများအားဖြင့်ဒါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအမှုအရာယူကြဘူး, သူတို့ကသင့်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုလုပ်ရပ်အပေါ်သယ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်တက်မှုတ်ဖို့ထက်ကိုပြသကြကုန်အံ့မှပိုကောင်းမယ့်သူတို့သိရ.
ရိုးသားမှုဆက်ဆံရေးကအရေးကြီးတယ်, သငျသညျပြင်ပကမ္ဘာမှ loveable ထက်လျော့နည်းနေသည့်အခါနှင့်လက်ျာဖက်ပင်သင်ခစျြလိမျ့မညျ. သင်အမှန်တကယ်လိုချင်တဲ့အရာ voice မနိုင်လျှင်, ထို့နောက်ဘယ်လိုသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်သင့်အားငါပေးမည်?
ဒီထိုကဲ့သို့သောခက်ခဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, အထူးသဖြင့်နှငျ့ညီညှတျဆီသို့ကွိုးစားကွတဲ့သူကိုသူတို့အဘို့. ဒါကြောင့်မည်သည့်အကူအညီကိုဖွင့်လိုလျှင်, သူတို့သည်သင့်အားမိန့်ခဲ့ကြသည်လျှင်သင်မှာပြစ်မှုမယူမယ်လို့တစ်လမ်းအတွက်စကားအသုံးအနှုနျးအရာထင်ဖို့ကြိုးစား. ဒါကလမ်း, သင်ပြဿနာကျော်အိပ်ဆုံးရှုံးဖို့မလိုဘဲထင်သောအရာကိုပြောနေနေ. ပို. သငျသညျဤအမှုကို, ပိုပြီးသဘာဝကြောင့်သင်တို့ဆီသို့လာဦးမည်. အကြှနျုပျ၏အိမျတှငျ, ဘွယ်ရာများနှင့် purring နှစ်ဦးစလုံးသည်သာမန်ဆူညံသံများမှာ, ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်ရိုသေလေးစားမှုအမျိုးအစားညွှန်ပြ: တခြားသူတွေအတွက်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်.
5. ထိုခဏခြင်းတွင်တည်ရှိ: အစဉ်မပြတ်ငါငါ့အကြောင်က Chris ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားပုံကိုဆင်တူတဲ့အာရုံနှင့်အတူငှက်တို့သည်စောင့်ကြည့်ဘယ်လောက်မှာအံ့သြမိပါတယ်. နောက်ကျောဒေါက်မြင့်ဖိနပ်မှအကြှနျုပျကိုဆောင်တတ်၏သော - ထိုနှင်းဆီပန်းအနံ့မှရပ်တန့်ခြင်း၏အဟောင်းကိုအလေးချိန်တစ်အကြောင်းပြချက်ကျော်ကြား.
ငါ့အဟောင်းဖိနပ်စုဆောင်းမှုအချို့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အရောင်များနှင့် strappy embellishments ခဲ့, ငါနေဆဲညာဖက်မတ်မတ်အဘို့အကြှနျုပျ၏ဗီအတွက်စောင့်ဆိုင်းနေအတော်လေးအနည်းငယ်စွမ်းရှိသည်, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးဒီဝင်ရိုးစွန်းရေဝဲ၎င်း၏ချုပ်ကိုင်ဆုံးရှုံးဖို့. ခရစ်ငါ Las Vegas တွင်အတူတကွကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးခရီးစဉ်အပေါ်သွားသောအခါ, ကျွန်မအကြောင်းငါးခုစွမ်းထုပ်ပိုး, အဆုံးမဲ့ sequins နှင့်အမွေးအတောင်စိတ်ကူးယဉ် (ဟန်, ငါ့ဦးခေါင်း၌, Vegas မှတစ်ဦး showgirl တူဒိုင်ယာလော့ဆိုလိုသည်။) ငါဝတ်ထားဘယ်နှစ်ယောက်သူတို့အားစွမ်း၏အဆုံးသတ်ခဲ့ပါ? သုည. အဲဒီအစား, ငါ့ Target ကခြေနင်းကအပတ်ကကွန်ကရစ်ချွတ်ရိုက်နှက်, ငါသူတို့ကိုခဲ့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင် feeling သတိရ. မရေမတွက်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးတွေပလက်ဖောင်းဖိနပ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပတ်ပတ်လည်ရုန်းကန်, ပြူ-toe နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းဖြင့်ချိ. ငါစိတ်ရင်းမှန်နဲ့သူတို့ကိုတစ်ခုံတန်းရှည်နှင့်အချို့သောတီးဝိုင်း-အကူအညီအထောက်အပံ့များကိုပူဇော်လိုခဲ့, ငါ့အစောပိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကသူတို့ကိုမြှောင်ရုန်းကန်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့သိရှိခြင်း.
သူတို့ပြန်ရာဌာန၌၎င်းတို့၏သားမွေးအတွက်အဆင်ပြေချောမွေ့နိုင်အောင်ငါ့ကြောင်ရှဉ့်ကိုစောင့်ကြည့်ကြရုံပေါ်ထွက်လက်လွတ်ဘယ်တော့မှ, ငါနှင့်အတူခြေနင်းဟောင်းနွမ်းခဲ့ငါနဲ့ Chris နှင့်အတူတက်စောင့်ပါပြီနိုင်ဘယ်တော့မှမ4လက်မဓာတ်လှေကား. နတ်ဆိုး, အကောင်းဆုံးအအားလပ်ရက်မှာလက်တွေ့ဘာမှမလုပ်ဘဲသင့်လျော်ဖိနပ်နှင့်အသုံးစရိတ်နာရီအပေါ်မှီခိုအားထား.
ဘဝအသက်တာအားလုံးကြီးထွားလာအကြောင်း, နှင့်ဆက်ဆံရေးကျနော်တို့ထိ မိ. လဲသကဲ့သို့ငါတို့သည်ပိုကောင်းကိုယျ့ကိုယျကိုနားလည်ကူညီရန်နှင့်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်. ထိုနည်းတူ, ဆက်ဆံရေးကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုကနေအကျိုးခံစားနိုင်သည်, တာဝန်ရှိရိုးသားမှု, ယခုပြီးတော့တချို့ရယူထားသောကျူးလွန်. မျှော်လင့်, ကဲ့ရဲ့သံကိုပြု၏ကောင်းတစ်ဦးဟန်ချက်ရှာပြီး (အများအားဖြင့်) လမ်းတစ်လျှောက် purrs.